Friday January 21, 2022 - 20:56:17 in Wararka by Xarunta Dhexe
Caddeymo cusub oo la helay ayaa muujinaya in ciidamo Soomaali ah ay xasuuq ka gaysteen gobolka Tigray ee dalka Ethiopia, taasi oo tusmeyneysa isbaheysi cusub oo militari oo ka abuurmaya Geeska Afrika, waxaa sidaas qoray Wargeyska The Globe and Mail e
"Waxay u gowraceen sida digaagga oo kale,” ayuu u sheegay The Globe and Mail.
"Ma aysan muujin wax naxariis ah,” waxaa sidaas yiri Berket oo ah 32 jir beeraley ah oo ku sugan xaafadda Mai Harmaz ee gobolka Tigray. "Ciidamada Eritrea su’aalo ayey ku weydiinayaan inta aysan ku dilin. Balse Ciidamada Soomaalida marna sidaas ma sameyneyn.”
Kibrom, oo ah 37 jir Soomaali ah oo ka qaxay xaafadda Hamlo bishii Janaayo 2021, ayaa sheegay in gowraca ay sameynayeen ciidamada Soomaalida uu "xaqiiq maalinle ah” ka noqday xaafadda.
"Kaniisadaha waxay noqdeen guryaha ciidamada. Waxay gubeen kitaabadii. Kaniisadaha waxay noqdeen meel aan la aadi karin, sababtoo ah ciidamada Soomaalida way dilayeeen qof kasta oo halkaas taga,” ayuu yiri Kibrom.
"Shaki la’aan waa ay ka qeyb-galeen dagaalka,” waxaa sidaas yiri Gebremeskel Kassa, oo ahaa madax-shaqaalaha maamulkii ku-meel gaarka ee Abiy Ahmed uu u magacaabay gobolka Tigray kadib markii ciidamadiisa ay qabsadeen bilihii hore ee dagaalka.
"Dhammaan inteena xilalka sare hayey waan ogeyn arrintan,” ayuu u sheegay The Globe and Mail. "Ciidamada Soomaalida waxay tababar ku qaateen xerada Sawa ee Eritrea, taasi oo qeyb ka aheyd heshiis militari oo dhex-maray saddexda dowladood kahor dagaalka.”
"Waxay gebi ahaan ka baxeen gobolka bishii March,” ayey yiraahdeen saraakiisha.
"Wuxuu tani u arkaa fursad uu dib ugu qaabeyn karo Geeska Afrika oo dhan oo uu u jeedin karo dhankiisa,” waxaa sidaas yiri Martin Plaut, oo ah khabiir British ah oo ku takhasusay arrimaha Eritrea.
"Ka qeyb-gelinta ciidamada Soomaalida waxay aheyd tallaabadii ugu horreysay xiriri aad u qota dheer una muhiimsan oo uu isku dayayey inuu dhiso, kaasi oo isaga uu noqon lahaa boqorka,” ayuu Plaut u sheegay The Globe and Mail, isaga oo ka hadlaya xiriirka saddex geesoodka.
"Tan iyo 1970-maadkii ayuu daba socday damaciisa ah inuu burburiyo Tigray-ga. Si uu ugu guuleysto, wuxuu jeclaa inuu aas-aaso xiriir dhowr qaran ah oo ka hirgala Geeska Afrika, kaasi oo dalalka ay u jirayaan si iskood ah balse ay is-taageerayaan, halka ay baabi’inayaan dhaq-dhaqaaqyada gudaha.”